kaspersky Internet security 2011 + keys — MYSTERY ZILLION
kaspersky Internet security 2011 + keys
kaspersky Internet security 2011 + keys<br><a href="http://www.mediafire.com/?gdmik2j3ozz">ဒီမှာ</a> ယူပါ၊<br>
ဖိုင်က ပြန်ဖြည်တဲ့အချိန်မှာ အပြည့်အဝ မပြီးခင် Error တက်လာတယ်
ဖြည်လို့ရတဲ့ဖိုင်ထဲမှာပါတဲ့ KIS ရဲ့ exe ဖိုင်ကို သုံးပြီး Install လုပ်တော့လဲ မရဘူး
တခုခုမှားနေပြီထင်လို့ ဖြစ်နိုင်ရင် ဘယ်လို အဆင်ပြေအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို
ပြောပြစေချင်ပါတယ် ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
I type with Zaw Gyi Font but after I pressed upload button, all the words is changing to above from. Please someone help me, how should I do to see clear and right font. Please<br>
this site use unicode font . so in order to read or write in this forum , u need to have one of unicode font. u can have font and read detail in <br><br>http://blog.mysteryzillion.org/basic/unicode-guide/<br>;
@zawoo.iformat , ကျွန်တော် unicode font ပြန်ပြောင်းထားပေးတယ်။ MZ မှာက အခု Unicode နဲ့ ရေးတာပဲ လက်ခံတော့ပါတယ်။ Unicode အသုံးပြုပုံကိုတော့ @Morris ပြောတဲ့ link မှာ သွားရောက် ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ကို zawoo ရေ winrar error တက်တာလား။ ဒါကနောက် <a href="http://www.mediafire.com/?p9y6jl6p8z9br9l">link</a>; ပါ။ <br>အဆင်ပြေပါစေ။